फाेटाेग्राफरकै मुटु काँप्ने काेराेनाकालका यी १५ तस्वीर - DURBAR TIMES
HomeInternationalफाेटाेग्राफरकै मुटु काँप्ने काेराेनाकालका यी १५ तस्वीर
फाेटाेग्राफरकै मुटु काँप्ने काेराेनाकालका यी १५ तस्वीर
काेराेना सेन्टरमा जानुभन्दा पहिले अन्तिमचाेटी आफ्नाे पतिकाे हात समाउने पत्नी हाेस या मृत्युकाे मुखमा पुगेर फर्किएका आफन्तलाइ महिनाैँपछि भेट्ने आफन्त हुन् । तड्पिरहेकाे बिरामीलाइ भराेसा दिलाइरहने नर्स हाेस् या आफ्नै आँखाकाे अघि हारीरहेकाे जिन्दगी देख्दै गरेकाे डाक्टर हाेस । दैनिक काराेनाबाट मृत्यु भएकाहरूकाे अन्तिम संस्कार गरिरहेकाहरू। यस्तै कति प्रकारका तस्बिहरू हाम्राे आँखामा आजसम्म झल्किरहेका छन् । तर, शायदै हाम्राे ध्यान यी तस्बिर खिच्नेवालातिर पुगेकाे हाेला ।
एसाेसिएट प्रेस अर्थात AP ले आफ्ना १३ देशका १५ फाेटाेग्राफर्सहरूलाइ काेराेनाकालमा खिचेका तस्बीरहरूमध्ये उनीहरूलाइ प्रभाव पारेकाे अथवा गहिराे कथा बाेकेकाे कुनै १ तस्बिर पठाउन अनुराेध गर्याे । ती फाेटाेग्राफरहरूले पठाएकाे फाेटाे र त्यसकाे कथा सुनेर जाे काेहीकाे पनि मुटु काँप्ने गर्छ । आउनुहाेस फाेटाेग्राफरहरूले खिचेकाे फाेटाे र त्यसकाे बारेमा जानाैँ
फाेटाेः Ebrahim Noroozi / AP
१९ डिसेम्बर २०२० उत्तरी इरानकाे घीमशहर । फाेटाेग्राफर इब्राहिम नाेरूजी सँधैजस्ताे फाेटाे खिच्न घरबाट निस्केका थिए । त्यहिबेला उनकाे आँखाकाे अघि एक यस्ताे भयावह दृश्य देखियाे , जसकाे तस्बीर खिच्नका लागि उनले क्यामरा उठाउन समेत सकेनन् । फेरी उनले १८ वर्षीय के माे हुसेन खाेशनजर, ३१ वर्षका हसन कबीर र ५३ वर्षका अली रहीमीलाइ देखे । ती तीनजना व्यक्ति काेराेनाबाट मृत्यु भएकाे व्यक्तिकाे लास सफा गरिरहेका थिए । त्यसकाे अन्तिम संसकार गर्ने तयारी गरिरहेका थिए । इब्राहिम भन्छनः म बस एक लास देखेर डराइरहेकाे थिएँ । तर उनीहरू यस्तै ५०० भन्दा बढी लास दैनिक जलाइरहेका छन् । फेरी भाेलीपल्ट पनि काममा आउँछन् उनीहरू । यही कुरालाइ जाेड दिएर मैले आफूलाइ बचाउन सकेँ , नत्र मेराे सास त्यहि दिन जानेवाला थियाे । उनकाे आखैकाे अगाडी काेराेनाबाट ज्यान गुमाएका एक ५९ वर्षीय व्यक्तिकाे लास जलाउनुभन्दा पहिले सफा गरिँदै थियाे ।
याे तस्बिराइ ध्यान दिएर हेर्नुहाेस । कुनै अन्दाजा लगाउन सकिन्छ ? याे २०२० अप्रिल १८ तारिककाे हाे । इटालीकाे राेममा चर्चित राेलर सर्कस साे हुनेवाला थियाे । तर साे हुनुभन्दा केहि समयअघिमात्र इटालीमा पूर्ण लकडाउन भयाे । तर एक सर्कसकर्मी पूरै तयार भएर आइन् र साे पनि गरिन् । उनलाइ हेर्ने कुनै दर्शक थिएनन् । कुनै म्युजिक बजेकाे थिएन । फाेटाेग्राफर एलेसेन्ड्राका अनुसार उनकाे अनुहारमा छाएकाे भाव र सुनसान सर्कसका कारण मुटु नै काँपेकाे थियाे ।
फाेटाेः Alexander Zemlianichenko/AP
काेराेना महामारीकाे डर मनमा लिएर अर्काे बिमारीलाइ राहतकाे आभाष दिलाउनु कत्तिकाे साहसिक कदम हाे ? यही समयलाइ रूसका फाेटाेग्राफर अलेक्जेण्डर जमेलियानिचेकाेले कैद गरेका थिए १ जुन २०२० मा । एक फादर जाे प्रत्येक बिरामीहरूकाे घरघर पुगेर प्रार्थना गर्दथे । फादरकाे त्याे डर र भराेसा मिश्रित अनुहार देखेर फाेटाेग्राफरकाे हात तस्बिर कैद गर्नका लागि समेत हिम्मतिलाे बनेकाे थिएन ।
१३ अगस्ट २०२० , अर्जेन्टिनामा एक ८४ वर्षीय बृद्धाले काेराेनालाइ जितेपछि खुशीले गदगद हुँदै जब फाेटाे खिच्नका लागि पाेज दिइन् । फाेटाेग्राफर नताशा पिजारेन्काे अचम्मित र अत्यन्त खुशी भइन् । आजपनि नताशालाइ याे फाेटाे हेर्दा धेरै आनन्द मिल्छ र आत्मबल पनि मिल्छ । उनी भन्छिन्ः जब मैले फाेटाे खिच्नका लागि क्यामरा उठाएँ ती बृद्धाले आफ्नाे हात मुठ्ठी कसेर आकासतिर उठाइन र मुस्कुराइन् । म अचम्मित र एकदमै खुशी भएँ ।
ब्राजिलका फोटोग्राफर फिलिप डेना कोरोना महामारि भन्दा पहिले एउटा असाइन्मेन्टका लागि स्पेन गएका थिए । महामारी फैलिएपछि उनलाई ब्राजिल फिर्ता बोलाइयो । त्यसपछि उनलाई कोरोनाबाट मृत्यु भएका हरुको लाश जलाउने कामको फोटो खिच्न लगाइयो ।जब उनी काममा लागे उनले देखे की लाशालाई सडकबाट लैजानु साटो एक नदी हुँदै लगिँदै थियो । पछि उनलाई थाहा भयो कि सडकबाट लैजादा भाइरस फैलिने डरका कारण नदीबाट लास लागिएको थियो । यो सब देखेपछि फिलिपको मनमा यस्तो डर पैदा भयो कि आजसम्म पनि उनी यसबाट छुटकारा पाउन सकेका छैनन् ।
एरियाना क्युबिलेस आजपनि यो तस्बिर हेर्दा झस्किन्छिन् । उनलाई लाग्छ की कोरोना उनको स्वतन्त्रता छिन्यो । यो तस्बिर ८ अगष्ट २०२० को हो यसमा भेनेजुएलाका पुलिसहरु नियम पालना नगर्ने हरुलाई भ्यानमा राखेर लैजाँदै छ ।
दिल्लीका फोटोग्राफर मनीष स्वरूप जतिबेला यो फोटो हेर्छन् त्यतिबेला आफूलाई एक्लो र बेसाहारा पाउँछन् । यो तस्वीर प्रवासी मजदुरहरु भारत आउँदा एक बच्चीलाई क्वारेन्टाइन मा राख्दाको हो । जहाँ उनको साथमा अरु कोही छैनन्। उनी उदास भएर झ्यालबाट बाहिर हेर्दै थिइन् ।
फाेटाेः Jae C. Hong/AP
क्यालिफाेर्नियाकाे सेण्ट ज्यूड मेडिकल सेन्टरकाे याे तस्बिर जाेय सि हांगले खिचेका थिए । जाेय आफ्नाे पारिवारिक कामका लागि सेण्टर गएका थिए । त्यहाँ उनले एक पत्नी जाे आफ्नाे पतिलाइ अलविदा भन्दै थिइन् । उनलाइ देखे । तस्बिर त उनले खिचे । तर याे तस्बिरले उनलाइ भित्रैदेखि हलचल पैदा गरिदियाे । उनी भन्छन्ः मेराे करियरमा याे पहिलाेपटक हाे , मेरै अगाडी काेही मर्दै गरेकाे देखेँ ।
फाेटाेः John Minchillo/AP
अघिल्लाे वर्ष न्यूयाेर्कका सबै अस्पताल तथा घाटमा फाेटाे पत्रकार प्रतिबन्धित थिए । तर पछि कुनै कुनै अस्पतालहरूले फाेटाे पत्रकारहरूलाइ अनुमति दिए । उनीहरूलाइ लाग्याे कि जब मानिसहरू आफ्नाे आँखाले सच्चाइ देख्छन् तब याे बिमारीलाइ गम्भीरताका साथ लिन्छन् । त्यहीबेला जाेन मिनचिलाेलाइ एक अस्पतालमा जाने माैका मिल्याे । उनकै आँखा अघि एक काेराेना बिरामीलाइ कार्डियाक अरेस्ट आयाे । अस्पतालका सबै स्टाफहर एकातर्फ बिरामीकाे उपचार गरिरहेका थिए भने दाेस्राेतर्फ बिरामीकाे हाैसला नटुटाेस भनी अजिब हर्कत गरिरहेका थिए । फाेटाेग्राफर जाेन बताउँछन् कि केही समयसम्म उनलाइ अचम्म लागिरह्याे । उनले याे तय गर्न सकेका थिएनन् कि याे फाेटाे खिचुँ या नखिचुँ । अन्तिममा उनले याे फाेटाे खिचेरै फर्किए ।
याे तस्बिर चीनकाे बुहान प्रान्तकाे हाे । ७६ दिनकाे लकडाउन खुलेपछि जब फाेटाेग्राफर एनजी हान गुआनले एक बालकलाइ मास्क लगाएर सुतेकाे देखे उनकाे मनमा नकारात्मकता फैलियाे । उनले बितेका अढाइ महिनाका सबै कुरा सम्झिए । जब शहर पुरै मृत्युकाे मुखमा पुगेकाे थियाे । नदी किनारमा घुम्न आउने एक दुइ मानिसले उनकाे मनमा खुशी पैदा गर्याे ।
२२ जुन २०२० , स्पेनकाे बार्सिलाेनाकाे एक अस्पतालमा ८१ वर्षीय अगस्टिना केनामेराेले आफ्ना ८४ वर्षीय पति पास्कल परेजलाइ छाेड्नुभन्दा अघि दाैडेर गला लगाइन अनि किस गर्न थालिन् । उनीहरूकाे बीचमा एक प्लास्टिक थियाे । जसले उनीहरूलाइ छुट्याएकाे थियाे । याे पललाइ क्यामरामा कैद गर्ने फाेटाे पत्रकार एकिलाे माेरेन्टी भन्छिन्ः फाेटाे खिच्ने बेला मैले आँफैलाइ सम्हाल्न सकिनँ । आँखाबाट आँशु बगिरहेका थिए । मैले आफ्नाे धेरै भित्रदेखि नै एकप्रकारकाे दुःख महसुस गरेकी थिएँ ।
फाेटाेः Jerome Delay/AP
२८ मार्च २०२० इस्ट जाेहान्सबर्गकाे अलेक्जेण्ड्रा टाउनसिकाे ब्वाइज हाेस्टलकाे छेउमा तैनाथ बन्दुकधारी पुलिसफाेर्स । फाेटाेग्राफर जेराेम देरी भन्छन्ः याे तस्बिरलाइ देख्दा मलाइ १९९४ भन्दा पहिलेकाे साउथ अफ्रिका याद आउँछ । जब उनी फाेटाे खिचिरहेका थिए तब ब्वाइज हाेस्टलबाट मानिसहरू चिच्याइरहेका थिएः हामी बाहिर गएनाैँ , काम गरेनाैँ भने के खाने ? हामीसँग खानका लागि केही छैन ।
फाेटाेः Rodrigo abd/AP
पेरूकाे लिमा शहर । यहाँ लामाे मरूभूमी छ । यहाँ करिब १ कराेड मानिस गरिबीकाे रेखाभन्दा तल्लाे स्तरकाे जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । कहिलेकहिले त उनीहरूसँग पिउने पानीसमेत हुँदैन । यस्ताे स्थानमा गएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाइ कति गार्हाे हुन्छ कि उनीहरू त्यहाँ जाउन्, काेराेनाका बिरामीहरूकाे उपचार गरून अनि यदि कसैकाे मृत्यु भएमा उनीहरूकाे अन्तिम संस्कार गरून् । फाेटाेग्राफर राेड्रिगाे एबीडी भन्छन्ः म कहिले पनि याे तस्बिरलाइ बिर्सिन सक्दिनँ । अन्तिम संस्कार गर्ने व्यक्तिहरू त्याे ठाउँमा जसरी काम गरिरहेका थिए , त्याे देखेर पीडा र आफ्नाे कामप्रति जिम्मेवारी भाव दुवै एकैसाथ आउँछन् ।
याे तस्बिर इजरायलका फाेटाेग्राफ ओडेज बेलिल्टीले २१ सेप्टेम्बर २०२० मा खिचेका थिए । हाेलाेकास्ट सर्वाइवर अर्थात जब जर्मन तानाशाह एडाेल्फ हिटलर इजरायलका मानिसहरूलाइ बन्दी बनाएर मारिरहेका थिए , त्यहाँबाट बाँचेर निस्किन सफल एहाेशुआ डेटसिनिगर आफ्नाे हातमा छापिएकाे बन्दी नम्बरवाला ट्याट्रमा धागाे बाँधिरहेका थिए । उनी बिहानकाे प्रार्थनाका लागि यहुदीहरूकाे उपासनागृह सिनेग्याग जाँदै थिए । जबकि सरकारले उक्त स्थान केबल २०जनाका लागि मात्र खाेलेका थिए । ओडेब भन्छन्ः एहाेशुआलाइ देखेर मलाइ लाग्याे कि उनले पछिल्लाे युद्ध पनि जितेकाे थिए , अब एकचाेटी फेरी दाेस्राे युद्ध पनि जित्न तयार छन् । याे कुराले मेलाइ गहिराे प्रभाव पार्याे ।
फाेटाेः AP/Andre Penner
याे अन्तिम तस्बिर १ अप्रिल २०२० काे हाे । याे भयावह स्थान ब्राजिलकाे साओ पाउलाेकाे हाे । यसलाइ आन्द्रे पेनरले खिचेका हुन् । पहिलाेचाेटी साेशल मिडियामा जब याे तस्बिर भाइरल हुन थाल्याे प्रेसिडेन्ट जाेयर बल्सनाराेले यसलाइ फेक न्युज भनेका थिए । यतिबेला ब्राजिल सरकार काेराेनाबाट मृत्यु भएकाहरूकाे सहि आँकडा बताउनबाट लुकिरहेकाे थियाे । त्यहि बेला पेनरले याे तस्बिर आफ्नाे घरबाट ड्राेन उडाएर खिचेका थिए । उनलाइ डर लागेकाे थियाे कि उनी बाहिर गएर फाेटाे खिचे भने घरमा भाइरस लिएर छिर्नेछन् । तर याे तस्बिर देखेपछि उनकाे मनमा अचम्मकाे डरले डेरा जमायाे ।
Previous articleबन्दुकधारीहरुको आक्रमणमा कम्तीमा चार सैनिक मारिए
Next articleअझै पाएनन् स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता